बहस : अलमलमा नेकपा, कहाँ पुग्छ यसरी ? भुसाल, न्यौपाने र भट्टराईलाई प्रश्न - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
बहस : अलमलमा नेकपा, कहाँ पुग्छ यसरी ? भुसाल, न्यौपाने र भट्टराईलाई प्रश्न
चैत २४ गते, २०७५ - १६:३८
काठमाडौं । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच गत जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण भएको थियो । एकीकरण सभामा शीर्ष नेताले तीन महिनाभित्र पार्टी एकता टुंगो लगाउने उद्घोष गरेका थिए । केन्द्रमा एकता भएकोे १० महिना पुग्दा समेत तल्ला तहको एकता टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सम्पूर्णरुपमा एकता टुंगो नलाग्दा पार्टी कार्यक्रम शुन्य जस्तै छ । जसको असर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मकै गतिविधि प्रायः ठप्प छन् । हालसम्म सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी मात्रै गठन भएका छन् । जिल्ला नेतृत्व गठनको विषय झनै सकसमा छ । पार्टीका नेता माधव नेपाल पक्षधरले भित्रि सहमति प्रति तल्ला कमिटिसम्मै सर्कुलर सहितका कार्यक्रम ल्याएको छ । घोषणा भइसकेका प्रदेश कमिटीको विषयमा ओली, दाहाल र नेपालबीचमा विवाद रहेको छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट, पोलिटब्युरो गठन, विभाग, जनवर्गीय संगठनको एकता, जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्मका कमिटीहरूमा एकता नहुँदा तिनका काम संयुक्त विज्ञप्तीमा निकाल्नेमा सिमित भएको छ ।
एकता कहाँ पुग्यो र किन ढिला भयो भनि नेकपा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसाल, केन्द्रिय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने र केन्द्रिय सदस्य राजन भट्टराईलाई हामीले प्रश्न सोधेका थियौं ।
चैत २४ गते, २०७५ - १६:३८ मा प्रकाशित
हामी नै भूमिका विहिन अवस्थामा छौं
पार्टी गुटमा विभाजित हुने अवस्था आयो । एउटाले अर्कोको फरक मतलाई देख्नै नसक्ने अनि बार्गेनिङ्ग गर्ने अवस्था छ । पार्टी एकता भएको यति लामो समयसम्म पनि एकता प्रक्रिया टुङ्गो तर्फ पुग्ने भन्दा पनि अलमलिने अवस्था आएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा त झन् अनिश्चता विकास हुँदै गरेको देखिन्छ ।
एकता विधि र प्रक्रिया अनुरुप हुनुपर्दछ तर यहाँ चक्मा टाईपमा टुङ्ग्याउन खोजिँदा पनि समस्या आएको हो । अर्को जुन खालको प्राकृतिक कोर्स पुरा हुँदै एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।
यस बीचमा नेतालाई गाली गरेर पनि समस्या हल हुने होइन । तलबाट हामी तर्फ पनि आलोचना भइरहन्छ । तर मुख्य समस्या एकाध नेताबाहेक अन्य नेता कार्यकर्ता भूमिका विहिन जस्तो अवस्थामा छौं ।
एकता प्रक्रिया नटुग्याई पनि नहुने अवस्था छ । नत्र हामी बडो अप्ठ्यारो ठाउँमा जान्छौं । दिर्घकालीन र उद्देश्यमुलक खालका सोंच हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ । कुनै एक हिजोको पार्टी वा गुट हाबी हुने अवस्था आउनु हुँदैन । त्यसले हामीलाई फेरि विभाजित अवस्थामै लैजान्छ । यसमा अलि बढि मुख्य लिडरले सोंच्ने अनि अरुलाई योगदान गर्ने अवस्था दिनुपर्ने हुन्छ ।
यो खालको एकता विगतमा सायदै भएको थियो । यति ठुला पार्टीहरुको एकता प्रक्रियालाई सामान्य रुपमा बुझ्न मिल्दैन । फरक–फरक पृष्ठभूमि सहित आएका पार्टीहरुको विचार, दृष्टिकोण त्यसपछि संगठनात्मक एकता गराउने कुरा सामान्य होइन । केहि कमजोरीले एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ ।
हिजो एकिकरणको प्रक्रिया दुई जना नेताहरु बसेर त्यसलाई टुङग्याउने अवस्था बनेको थियो । त्यसभन्दा पछाडि बनिरहेका संरचनाहरु चाहे त्यो सचिवालय होस वा चाहे त्यो केन्द्रिय कमिटि या प्रदेश कमिटिको कुरा हो, निर्णय गर्नको लागि दुईवटा अध्यक्षले नै मुख्य भूमिका खेल्नु भयो । अब अहिले केहि काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । एउटा जिल्ला कमिटि बनाउने (अध्यक्ष र सचिव तोक्ने), दोस्रो बनेको केन्द्रिय कमिटिलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने । तेस्रो, जनसंगठनको एकिकरणको गराउने कुरा ।
हिजो हामीले जुन प्रक्रियाबाट एकिकरण यहाँसम्म ल्याइपु¥याएका थियौं, आज केहि रोकिए जस्तो देखिन्छ यसमा खास विगतका नजिरलाई प्रयोग गर्ने कुरामा समस्या छ । जे स्प्रीटका आधारमा एकिकरण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो त्यहि नै अब बनाउने संरचनामा अबलम्बन हुनुपर्दछ । तर त्यो हुन सकेको छैन् ।
एकता प्रक्रिया ढिला हुनाले स्वभाविक रुपमा धेरै समस्याहरु बन्न गएका छन् । हाम्रो पार्टीको सिंगो पंक्ति यसबाट प्रभावित भएको छ । लाखौं कार्यकर्ता अलमल परेको अवस्था छ । जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिएका छन् । मुलुकको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरामा चुक्नु हुँदैन । ७० वर्षको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अहिले सबैभन्दा उचाईमा पुगेको छ । यहाँसम्म ल्याउने नेतृत्वलाई सबैको सहयोग र साथ चाहिन्छ ।
मिडियामा अनेकन विषय आएका छन् । ति कति यथार्थ छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । माधव नेपाल जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले कम्युनिष्ट आन्दोलनको यो ऐतिहासिक क्षणमा समानान्तर कमिटि निर्माण गर्नतिर लाग्छन् भन्नेमा मलाई विश्वास छैन। यस्ता प्रक्रियाले नेतृत्वलाई सहयोग पुग्दैन् । हामी हाम्रो लक्ष्यमा सफल हुँदैनौं ।
विवाद हुनु सामान्य हो । हरेक परिवार, सुमदाय, पार्टी र राष्ट्रमा विवाद छ । विवाद हुने कुरालाई म सहजै ठान्छु । मुलुक, पाटी अगाडि बढाउन, नयाँ कुरा सिक्नलाई विवाद बहस हुनुपर्ने हो तर त्यतातिर अहिलेको बहस गएको छैन । जसको कारण हामीले मुल्य चुकाइरहनु परेको छ ।
देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको नेकपा भित्रको एकता प्रक्रियाको विवाद एकदमै दुखद छ । यत्रो पार्टी, यत्रो सम्भावनालाई हामीले पार्टीको पक्ष अनि मुलुकको पक्षमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । हामीले समाजवाद अनि समृद्ध नेपालको कुरा गरेका छौं । यो एकता प्रक्रियाले निचोड नलिंदा सबैले मुल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था छ । हाम्रा कारणले यत्रो ठुलो मुल्य चुकाउने कुरा कुनै हिसाबले पनि राम्रो होइन ।
लथालिङ्ग पार्टी संरचनाको हामीले पनि जिम्मा लिन्छौं । हाम्रो नालायकीको जिम्मा हामीले लिनुपर्दछ । अध्यक्षहरुको कारणले, सचिवालयको कारणले भएको अवस्थाको जिम्मा उनीहरुले लिनुपर्दछ । यहाँ जिम्मा लिने कुरा मात्र होइन् अगाडि जाने कुरा प्रमुख हुन्छ । तर समस्या अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा अझैपनि विधिलाई अपनाउन खोजिएको छैन । विधिलाई स्वीकार गर्न नसक्नु दुःखद छ । गुट बनाउने, आफ्ना मान्छे छान्ने हो भने एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने अवस्था हुँदैन । नेतृत्वले गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्दछ । आफ्ना मान्छे छान्ने, गुट बनाउने कि, एकता प्रक्रिया टुंग्याएर मुलुकको पक्षमा काम गर्ने ? हामीलाई यो अवसर फेरिफेरि नआउन सक्छ ।
चिनिया राष्ट्रपति सि को यस्तो उत्प्रेरक सन्देश
म सानो छँदा ज्यादै स्वार्थी थिएँ। सबै कुरामा म आफ्नो मात्र फाइदा हेर्थें। फलतः मलाई सबैले छोड्दै गए,...
बार्सिलोनाद्धारा रियालमाथि गोलको बर्षा
काठमाडौं । स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन बार्सिलोनाले गोलको वर्षा गरेको छ । मंगलबार...
नेकपाले उम्मेदवारको टुंगो लगायो
तडी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी मंसीर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि पुरचौंडी नगरपालिका...
सनसनीपुर्ण खबर : विश्वको आयु ४१ वर्ष बाँकी-आइज्याक न्युटन
एजेन्सी । यदि महान वैज्ञानिक आइज्याक न्युटनले गरेको भविष्यवाणी सत्य हुने हो भने अबको ४१ वर्षपछि सँसारको...
तनहुँ । तनहुँको भानु नगरपालिका–२ फुस्रेटारमा चितुवाको आक्रमणबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु...
आज भाइटीका – शुभसाइत बिहान ११ : ५५ बजे यसपाली पाँच रङ्गको भाइटीका !
काठमाडौं। प्रत्येक वर्ष कात्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको मुख्य...